HomeDUNIDAAasiya86 ShiinahaWadada Dhaadheer ee Shiinaha ayaa ku Dhamaatay Hal Safar
Wadada Dhaadheer ee Shiinaha ayaa ku Dhamaatay Hal Safar
30 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 86 Shiinaha, Aasiya, DUNIDA, tareenka, GUUD, Headline 0
c km tareenka ayaa lagu dhammaystiray hal go
Shiinaha, tareenka ugu horreeya, oo loo dhisay in dhuxul looga qaado waqooyiga loona tago gobollada koonfurta oo lagu dhammeeyo hal go, ayaa si rasmi ah loosoosaaray.
10 kun oo tan oo tababbarka dhuxusha qaada ah oo laga soo qaaday tuulada Hole Baoji ee Inner Mongolia ilaa Ji'an, gobolka Jiangxi, ayaa si rasmi ah loosoosaaray Shiinaha, kaas oo dhameystiray dhismihiisa hal mar.
Kunka 813 kiiloo mitir ee dherer tareenka ah wuxuu dhex maraa gobolka Inner Mongolia ee Shiinaha iyo gobollada Sha'anxi, Shanxi, Henan, Hubei, Hunan iyo Jiangxi. Mashruucu sidoo kale waa wadada tareenka ugu dheer uguna culus adduunka. Wadada tareenka ayaa muhiimad weyn u leh gaadiid ka qaada dhuxusha waqooyiga ilaa gobollada koonfurta iyo qeybinta tamarta qaranka.
Adapazari Express waxay qaadataa rakaabka 400 hal mar 05 / 01 / 2015 Adapazarı Express waxay raaci doontaa rakaabka 400 hal mar: Adapazari Express, oo la joojiyay sannadihii 3, ayaa bilaabay inuu dib u furo kaddib markii muddo dheer oo ah Adapazarı Express, oo joojiyay 3 sano ka hor sababtoo ah dhismaha xawaaraha sare ee tareenka, ayaa bilaabay duulimaadkeeda maanta. Adapazari Express, oo ah gaadiidka muhiimka ah ee rakaabka ee u dhexeeya Sakarya-Izmit iyo Istanbul, ayaa duulimaadkii dib u bilaabay dhammaystirka shaqada tareenka xawaaraha sare leh. Markii hore xawaaladda 12 ka tagtay 12, xitaa iminka 4 waxay tagtay imaanshihii 4 waxaa lagu dhajiyay daraasad 8 ah. XIDIGA 3 JOOJI KARAA ADAPAZARI TALAALO XIDHIIDHA
Adana Metro waxay ku socotaa dhinac kasta hal mar 03 / 03 / 2019 Duqa Magaalada Adana iyo Isbahaysiga Madaxwaynaha ee Magaalooyinka Magaalooyinka Magaalooyinka Adana Hüseyin Saylu ayaa la kulmay dadka deggan Beyazevler Deriska. Qalabaynta 5 ee sanadka oo dhan oo ku yaala Adana, xaruntii hore ee dayactirka, oo muujinaya in ay isku dayayaan inay samaystaan ​​madax caafimaad leh Xuseen Verbal Waxaan rajeynayaa inaad fursad u heli doonto inaad dhammaan dhinacyada hal mar la wadaagto nidaamka tareenka. Afkaar, "Buundada ugu horeysa ee magaalada kun sano jir ah waa Taşköprü, labaadna waa buundada weyn, kan kalena waa buundada Mustafa Kemal Pasha inta lagu jiro Selahattin Colak. Anaga, 10, waxay ka badan yihiin saddex buundo oo ku yaal Bosphorus iyo mid ka mid ah buundooyinka gudbinta Gulf, oo mid ka mid ah midka kugu haboon sanadka dhexdiisa ...
Magaalada Istanbul ee caasimadda ayaa doonaya in ay qadada metro u adeegto hal mid ah 2013 05 / 07 / 2012 Hawlaha madaarka ee Istanbul ayaa si dhaqso leh u socda. hoostiisa mara ayaa marka hore, kaas oo shaqada dhismaha bilaabay on drives imtixaanka ay line Kadikoy-Kartal halka line Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy dhinaca Anatolian. 29 dhismaha Marmaray ee magaalada ayaa la qorsheeyay in la furo ee October xnumx`t khadadka dheer in la dhameystiro. Metropolitan Municipality (IMM) ayaa la qorsheeyay in lagu hagaajiyo xawaaraha 2013. gaadiidka tareenada ee magaalada dhexeeya dhererka shaqo ee Metro Goynaya Golden Geeska Bridge, taasoo kor u qaadi doonta 2013 kiiloomitir, Otogar-Bağcılar-Başakşehir-Olimpiyatköy, Kartal-Kaynarca metro ah, waxa uu ku yaalaa xiriir Yenikapi. In 30 bilaabi dhismaha oo ka mid ah iett`n Otogar-Bağcılar-Başakşehir-Olimpiyatköy bilaabi lahaa 2003 of tube imtixaanka wadista ah. 2008 ...
Mashruuca Tareenka kaliya ee Codka kaliya ee ka socda Mashruuca Ganacsiga Samsun Sarp 30 / 12 / 2012 Mid ka mid ah Voice ka Badda Madow Business Adduunka Single Target uga yaacday ilaa Railway Project Samsun Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize iyo Hopa TSO gool caadiga ah ee madaxweynaha. Ka hawlgala gobolka Badda Madow, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize iyo Hopa TSO Samsun waddooyinka, taas oo kor u madax mashruuca tareenka uga yaacday ku heshiiyay in tallaabo wadajir ah, waxaa curin. Badda Madow si ay horumarka iyo dhaqdhaqaaqa madaxdii TSO ee tareenka, oo waxay dabooli doontaa dhammaan gobollada ku teedsan xeebaha gobollada waa in aanay u leeyihiin in ay noqon dhan-out tallaabo. Ra'yiga madaxweynaha TSO ee mashruuca tareenka Samsun-Sarp waa sidan soo socota; MURZIOĞLU: Waxaan haystaa HAND M M
Adapazari Express waxay qaadataa rakaabka 400 hal mar
Magaalada Istanbul ee caasimadda ayaa doonaya in ay qadada metro u adeegto hal mid ah 2013
TCDD ilaa Yilmaz Ozdil waqtigaan ayaa uga mahad celiyay tareenka dhakhsaha badan
Pamukkale Express 7 hal sano kadib
IZBAN ee Torbali hal mar